यौनकर्मीको आत्मकथा: ‘मेरा ग्राहक सांसद, पुलिस र आर्मी’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यौनकर्मीको आत्मकथा: ‘मेरा ग्राहक सांसद, पुलिस र आर्मी’
जेठ ३ गते, २०७६ - १७:३२
काठमाडौं ।रातोपुलको एउटा क्याफेमा सेतो पेन्ट, कालो र नीलो छिर्केमिर्के टिसर्टमा आइपुगिन् उनी । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा यौनकर्मीको संख्या ५४ हजार नाघिसक्यो । त्यही ५४ हजारको संख्या मध्येकी एक थिइन्, उनी ।
भित्री मधेसकी एउटी सोझी युवती कसरी काठमाडौंकी मध्यम स्तरको यौनकर्मी हुन पुगिन् रु निकै लामो कसरतपछि आत्मकथा सुनाउन राजी भइन् । उनको सर्त थियो ‘मेरा छोराछोरी ठूला भइसके, उनीहरुलाई मेरो कामबारे थाहा छैन, परिचय नखुलाइदिनुहोला ।’ उनको सर्त स्वीकार भएसँगै उनी शुक्रवारकर्मी प्रजु पन्तलाइ दुई दशक लामो यौनकर्म सुनाउन तयार भइन् ।
जब समाउने हाँगो हुँदैन नि, आफ्नो शरीर बेच्न पनि तयार हुनुपर्दोरहेछ । म यौनकर्मी बन्नुको पछाडिको कारण पनि यही हो ।
सुरुमा मैले जे काम गरिरहेकी छु, त्यसलाई यौनकर्म भन्छन् भन्ने थाहा थिएन । भित्री मधेसमा जन्मिएकी म जसले खान दिन्थ्यो, आफ्नो गुजारा चलाउने खर्च दिन्थ्यो उसैसगँ रात बिताइदिन्थँे । कतिले त पैसा पनि दिँदैनथे ।
१९ वर्षकै उमेरमा श्रीमान् बित्नुभयो । त्यसपछि मेरो काला दिन सुरु भए । त्यतिबेला मेरो बच्चा दुई वर्षको मात्र थियो । अर्को बच्चा २ महिनादेखि पेटमा थियो ।
आर्थिक अवस्था गाह्रै थियो । केही पुख्र्यौली सम्पत्ति त थियो तर दैनिक खर्च धान्न सक्ने खालको थिएन । त्यसमाथि पाहुना आइरहने, सन्तान पढाउनुपर्ने । श्रीमान् नभएपछि यी सबै खर्च धान्न गाह्रो भयो ।
श्रीमानका अरु दाजुभाइ नभएका हैनन् तर उनीहरुले वास्तै गरेनन् । घर तिरकालाई मात्र के भन्नु रु माइतीले समेत वास्ता गरेनन् । १२ वर्षको हुँदा नै आमा बित्नुभयो । बुबा अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो । दाजुको सरकारी जागिर थियो । उहाँले चाहेको भए भरथेग गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो तर कहिल्यै ‘खर्च कसरी चलेको छ’ भनेर सोध्नु भएन ।
केही समय श्रीमान्को ठाउँमा काम पनि गरेँ । धेरै पढेकी थिइनँ । जागिर पिउनको थियो । ५ वर्ष जागिरकै भरमा घर चल्यो । तर एक्कासि त्यो अफिसै बन्द भयो । मेरो कमाउने बाटो बन्द भयो ।
आम्दानी हरायो, यता छोराछोरी हुर्किए । पढाउने बेला भइसकेको थियो । कतैको आडभरोस थिएन । सासूआमाले माया त गर्नुहुन्थ्यो तर जेठाजूले देख्नै नसक्ने १
श्रीमान् बित्नुभएको ७ महिनापछि दोस्रो सन्तान जन्माएँ । उमेर भर्खरकै थियो । एक हिसाबले मेरो जवानी बल्ल शुरु हुँदै थियो । खान, डुल्न मन लाग्ने उमेरमै म थचारिएकी थिएँ ।
मलाई पढाउने टिचर थिए । उनले म सानो छँदा कपाल कोरिदिनु हुन्थ्यो । स्कुलमा पढ्न सघाउनुहुन्थ्यो । विवाह भएर स्कुल छुटे पनि देखभेट भइरहन्थ्यो । एक दिन उहाँले पोखरा घुम्न जाउँ भन्नुभयो । त्यतिबेलासम्म म कतै गएकी थिइनँ । गुरुले नै जाउँ भनेपछि घरमा कुरा मिलाएँ ।
श्रीमान् थिएनन् । त्यत्तिबेला कसैले मायालु पाराले बोलाउनु नै ठूलो कुरा लाग्थ्यो । बाइकमा सरसँग पोखरा पुगेँ ।
पहिलो दिन कुराकानी गरियो सुतियो । त्यस्तो केही भएन । भोलिपल्ट गुरुले बियर खाउँ भन्नुभयो । मैले कहिल्यै खाएकी थिइनँ । उहाँले बढी नै कर गरेपछि खाएँ । केही समय अलि लट्ठ परेको अनुभव भयो । सरले कोठामा लिएर जानुभयो ।
त्यसपछि उहाँको र मेरो सेक्स सम्बन्ध भएछ । मैले यो कुरा भोलिपल्ट मात्र थाहा पाएँ । मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो । माया गर्नेले सेक्स गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो । त्यो समय मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । चित्त बुझाएँ । पछि थाहा भयो, सरले त मेरो बलात्कार गर्नुभएको रहेछ १
पोखराबाट गाउँ फर्किएपछि उहाँसँग भेट भइरहन्थ्यो । सँगै पनि हिँड्थ्यौँ । सबैले कुरा काट्थे । विवाह गर्छन् भन्थे । उमेर त्यस्तै थियो । ज्यानले नै केटा साथी खोज्थ्यो । तर म एउटा कुरामा भने प्रस्ट थिएँ ।
मलाई विवाह गरेको लोग्नेले मलाई असाध्यै माया गथ्र्यो । उसले उपहारको रुपमा दुई सन्तान छोडेर गएको थियो । मैले अर्को विवाह गरेर बच्चा हुर्काइनँ भने उसको मायाको अपमान हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले अरुसँग सम्बन्ध राखे पनि विवाह गर्ने सोच कहिल्यै आएन ।
उहाँसँगको सम्बन्ध पनि नराम्रो लाग्न थाल्यो । जहिले आए पनि सेक्स गर्नै हतार । कुरा गर्न पनि नपाइने १ उसले मलाई यौन सन्तुष्टिका लागि मात्र उपयोग गरेझैँ लाग्न थाल्यो । एक दिन ठूलै झगडा भयो यही विषयमा र छोडिदिएँ ।
५ हजार दिने त्यो क्याप्टेन
त्यो समयमा स्थानीय रेडियोमा ‘मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो । मैले आफू विधवा भएपछि पाएको दुःख लेखेर त्यही कार्यक्रममा पठाएँ । ठेगाना पनि लेखेकी थिएँ । त्यसपछि त मलाई प्रहरी र सेनाका मान्छेहरुको चिठी पो आउन थाल्यो १
चिठी पठाउनेमा एक जना क्याप्टेन पनि थिए । उनले चिठी लेखेर खाता नम्बर मागे । मैले पठाइदिएँ । उनले त ५ हजार राखिदिएछन् । मान्छेको स्वार्थबारे त्यो बेलासम्म बुझ्ने भइसकेकी थिएँ । भेटै नभएको व्यक्तिले त्यत्तिकै पैसा दिँदा बडो अचम्म लागेको थियो । सबै स्वार्थी हुँदा रहेनछन् भन्ने त्यही दिन लाग्यो ।
चिठी पठाउने आर्मी र प्रहरीको संख्या बढिरहेको थियो । त्यो कार्यक्रमले आर्मी र पुलीससँग मेरो सम्बन्ध बढाइदियो । म त्यतिबेला निकै राम्री पनि थिएँ । गीत पनि गाउँथेँ । अफिस नजिकै ब्यारेक पनि थियो । ब्यारेकमा आउजाउ पनि बढी नै हुनथाल्यो । कतिले त विवाह गरौँ पनि भने तर छोराछोरी सम्झिएपछि मन लाग्दैनथ्यो ।
कर नतिर्न पुलिससँग लभ
अहिले आमाले सन्तानलाई गर्ने मायाबाहेक सबै माया नक्कली लाग्छ । मैले पनि धेरैसँग मायाको नाटक गरेँ । मसँग पनि धेरैले मायाको नाटक गरे ।
घर भारतीय सीमानजिकै थियो । खर्च चलाउन भारतबाट सामान ल्याएर बेच्न थालेँ । सीमामा कर बुझाउनु पथ्र्यो । कर बुझाए नाफै हुँदैनथ्यो । सीमामा तीन वटा चेक पोस्ट थिए ।
तीन वटा चेकपोस्ट झेल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो । उपाय खोज्दा आफ्नै शरीर देखेँ । तीन वटै चेकपोस्टका प्रहरीसँग लभको नाटक गरेँ । उनीहरुलाई शरीरमार्फत् सन्तुष्ट पारेँ ।
तीन वटै चेकपोस्टमा ब्वाइफ्रेन्ड भएपछि कर तिर्नु पनि परेन, सामान पनि जफत भएन । त्यसमध्ये एउटा पुलिस त पागलै भयो मेरो प्रेममा । बिहे गरौँ भनेको थियो । सुनको गहना पनि बनाइदियो । अहिले कानमा रिङ लगाउँदा पनि उसैको याद आउँछ । त्यो उसैले बनाइदिएको थियो । मैले नै धोका पो दिएँ कि जस्तो पनि लाग्छ, मन पोल्छ । त्यस्ता धेरै पुलिससँग सम्बन्ध भयो तर अरुको याद आउँदैन । म पनि स्वार्थले उनीहरुसँग लागेकी थिएँ, उनीहरुले पनि स्वार्थैले मलाई सहयोग गर्थे ।
त्यो अविवाहित ग्राहक
बीचमा अब धेरै जनासँग लाग्दिनँ भनेर एउटा मात्र ब्वाइफ्रेन्ड पनि बनाएँ । ब्वाइफ्रेन्ड भएपछि सति सावित्री पनि भएँ म । उसले मलाई पैसा दिन्थ्यो तर विवाह गरिनँ । यसपछि ऊसँग मेरो सम्बन्ध टुट्यो ।
सबै सम्बन्ध पैसाका लागि मात्र पनि हुन्नथ्यो नि १ हाम्रो पनि मनै हुन्छ । कसैकसैसँग सेक्ससँगै माया पनि लागिहाल्थ्यो ।
मेरा जोडीहरु अविवाहितभन्दा विवाहितै बढी भए । अविवाहित पनि हुँदै नभएका भने हैनन् तर अविवाहितसँग सम्बन्ध भयो कि विवाह गरौँ भन्थे, त्यसैले सकेसम्म विवाहितसँगै लागेँ ।
एक जना मेरो गाउँ नजिकैको केटा थियो । मेरो साथीको होटल थियो । उसले बोलाई । म गएँ । दिउँसो एकछिनको २ हजार नाइटको ५ हजार दिनुपर्छ भनेकी थिएँ ।
कुरा मिलायो । पहिला पैसा लिनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यो केटालाई मैले केही ढाँटिनँ । रेगुलर भेट्नुपर्ने भए पो ढाट्नु १ जे कामका लागि आएको हो, गर्छ–जान्छ भन्ने थियो ।
उसले सुरुमा नै तीन हजार दियो । एकदमै मिल्ने साथीझैँ भयो । त्यो दिन अबेला भएको थियो, बानेश्वरमा ल्याएर छोडिदियो । मलाई उसको बानी कस्तो छ भनेर चेक गर्न मन लाग्यो । मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर ढाँटेँ । उसले १ हजार रुपैयाँ ब्यालेन्स राखिदियो ।
ऊ विदेशबाट २÷३ महिनाको बिदामा आएको रहेछ । घर काठमाडौँबाहिर भए पनि एकदुई दिनमा आइहाल्यो । त्यसपछि हामी दुवै खुब घुम्यौँ । उसले मलाई टिप्स पनि दिन्थ्यो । स्कुटर किन भनेर ३० हजार पैसा दियो ।
पछि त विवाह गरौँ भनेर धेरै रोयो । ‘मेरो बाऊ आमालाई भन्छु बच्चा चैँ छैन भन’ भन्थ्यो । कोर्ट म्यारिज गरेर जाने भनेर सपिङ पनि ग¥यो । ऊ गयो । विदेशबाट पनि हुण्डीबाट ३० हजार पैसा पठायो । उसले फोन गरेको गर्यै गथ्र्यो । पछि मैले उठाइनँ ।
(कुराकानीकै बीचमा उनको मोबाइल बज्यो । अफिसतिर छु भनेर राखिन् । भनिन्, ‘यो चैँ अहिलेको बूढाको फोन । बूढा रु कस्तो बूढा रु उनको उत्तर थियो, ‘पाँच वर्षदेखि ऊ मेरो ब्वाईफ्रेन्ड भएको छ । मैले आफ्नो पेसा पनि छोडेको छैन, उसले घरपरिवार पनि छोडेको छैन ।’)
केही वर्षअघि यो अहिले फोन आएको मान्छेसँग मेरो सम्बन्ध अघि बढ्दै थियो । विदेश गएको केटाको कल आयो । त्यसपछि यसले फोन फालिदियो । अनि ऊ मलाई नै भेट्न नेपाल आयो । दोहोरीमा ‘मलाई बिर्सेर जाने भए जाऊ तर अन्तिम पल्ट भेट्न आऊ’ भन्ने गीत गाउन लगायो । दोहोरीभित्रै बसेर ऊ धेरै रोयो ।
धेरै पैसा पाउन धेरै ग्राहकसँग झूटो पनि बोलेकी छु । जसले धेरै पैसा दिन्थ्यो उसैसँग पनि गइयो । कहिलेकाहीँ सम्झँदा कसैको मायामा खेलवाड पो गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ तर मेरो पनि आफ्ना बाध्यता र निर्णय थिए ।
उल्टै मेरै पैसामा मोज
टन्न पैसा दिने मात्र हैन, पैसा नदिने, मेरो भएको सामान पनि चोरेर लैजाने ग्राहक त कति आए कति १ कोही त सेक्स गरिभ्याएपछि ‘तँलाई रण्डी’ भनेर गाली गरेर पैसा नदिई भाग्थे । त्यतिबेला के बोलुँ न के नबोलुँ हुन्थ्यो ।
म गाउँमा छँदा जतिबेला मलाई कसैले खान दिएकै भरमा उनीहरुसँग सुतिदिन्थेँ, त्यो बेलामा एकचोटी केही कामले काठमाडौँ आएँ । एउटा आर्मीसँग अकस्मात भेट भयो । अहिले सम्झँदा बागबजार लगेर राखेको रहेछ । उसले होटलमा लगेर राखिदियो । मसँग केही पैसा मात्र थियो ।
उसले होटलको बिल मैसँग माग्यो । सबै बिल तिर्यो । अगांलो हाल्ने, किस गर्नेबित्तिकै माया गरेको अनुभव भइहाल्यो मलाई । रातभरि मलाई भोग्यो ।
उसले सबै पैसा माग्यो, मैले दिएँ । भद्रकालीमा काम गर्छु भन्थ्यो । मलाई खासमा नाम पनि थाहा थिएन । अहिले जस्तो भएको भए त सबै हेर्थें नि १
एकैछिनमा आउँछु भनेर गएको ऊ भोक लागिसक्यो आउँदैन । कतै जान भाडा पनि थिएन । भद्रकाली मन्दिर बसेर रोएँ, सरापेँ । कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो १ संयोग भनौँ, गाउँकै एक जना दाइसँग भेट भयो । पैसा हरायो भनेर ढाटेँ । उहाँले दिनुभयो ।
सुन चोर्ने ग्राहक
गाउँमा छँदा घरनजिकै आर्मी ब्यारेक थियो । एक आर्मीसँग नजिक भएँ । ऊसँग परालको टौवामा सम्बन्ध भयो । त्यो बेला कानको टप नै हरायो । मैले उसलाई भनेँ तर उसले वास्तै गरेन । मैले उसलाई सरापेँ । पैसा पनि दिएन । ‘तँ नबोली जा’ भनेर उल्टो थर्कायो । पैसा दिएन । सुन पनि खाइदियो । अहिले पनि उसको र मेरो भेटघाट हुन्छ । अहिले भेट हुँदा बहिनी नमस्कार भन्छ ।
अहिले कोहीसँग नाइट बस्ने गरी जाने बेलामा गहना नलगाई जान थालेँ । कहिले लगाएर गएको बेला छ भने ग्राहक ट्वाइलेट गएको बेला त्यही डस्नामुनि लुकाउँछु ।
करिब १० वर्ष गाउँमा यसरी नै बसियो । धेरै जनासँग सम्बन्ध भयो । माइतीकाहरु हाम्रो बेइज्जत गरी भन्थे तर जिम्मेवारी चाहिँ नलिने । हेर्ने बेलामा वास्तै नगर्ने अनि बेइज्जत भो भनेर मात्र हुन्छ रु म र मेरा बच्चा भोकै मर्नु रु
यसपछि गाउँमा बस्न मन लागेन र काठमाडौं आएकी थिएँ ।
काठमाडौँमा आएपछि मात्र थाहा भयो, मैले गाउँमा बस्दा गरेको काम त यौनकर्मीको रहेछ १ म जस्तै अरु पनि हुने रहेछन् १ पहिला त यही धन्दा पनि के गर्नु भन्ने लाग्थ्यो । बाध्यता थियो । काठमाडौं आएपछि केही गल्ती गरेझैँ लागेन । जसले जे सक्छ, त्यही गर्ने त हो १
रेगुलर पाटर्नरसँग नो कण्डम
पेसाले नै यौनकर्म भएपछि मन मिल्नु नमिल्नु ठूलो कुरा भएन । पैसा पाए भयो । पैसामा कुरा मिल्यो कि सम्बन्ध भइहाल्थ्यो । नयाँसँग त कण्डम नलगाई मान्दै मान्दिनँ तर रेगुलर ग्राहक हो भने छूट पनि हुन्छ ।
कण्डम संस्थाले दिन्थ्यो तर प्रायः आइरहने ग्राहकहरु कण्डम लगाउन मान्दैनन् । त्यो ग्राहकले मलाई घरमा दाल, चामल किन्ने पैसा दिन्थ्यो, त्यो संस्थाले कण्डम मात्र दिन्थ्यो । कण्डम खानु भएन १
काठमाडौं आएपछि गाउँमा झैँ बोलाउना साथ जान छाडियो । काठमाडौं आएपछि त प्रोफेसनल भइयो । बोलाएपछि पहिला पैसाको कुरा हुन्छ । फिक्स भएर पैसा पाएपछि मात्र जाने हो । रेट ग्राहकअनुसार हुन्छ ।
ग्राहक नेता, पुलिस र आर्मी
मेरा प्रायः ग्राहक नेता, पुलिस र आर्मी नै हुन् । अन्य पनि नहुने हैनन् तर त्यसमा यिनको संख्या अलि बढी नै छ । मध्यम स्तरका नेता मेरोमा आइरहनुहुन्छ ।
उहाँहरु यस्तो सम्बन्ध गोप्य रहोस् भन्ने चाहनु हुन्छ । धेरै नबोल्ने, काम सक्ने अनि गइहाल्ने बानी हुन्छ उहाँहरुको । जसले यस्तो सम्बन्ध बाहिर खुलाउँदैनन्, नेताहरु त्यसकैमा त आउने हुन् १
मैले मिसकल गर्नेबित्तिकै कलब्याक गर्ने नेता अहिले पनि छन् । सांसदसँग पनि रात बिताएकी छु । नेता र सांसदसँग बस्दा हामी आफैँले होटलमा कोठा लिनुपर्छ । उनीहरु त आउने मात्र हो । नेताले सेक्स गर्दागर्दै ‘यौन व्यवसायीको लागि कस्तो नीति बनाउने’ भनेर पनि सोध्छन् ।मेरा रेगुलर ग्राहक आर्मी र पुलिस पनि छन् । आर्मीमा जर्नेलसम्मका व्यक्तिसँग बसेकी छु । पुलिस त कति आए आए १
ग्राहक गनेर सकिन्न
एक दिनमा ४÷५ जनासँग समेत सम्बन्ध राखेकी छु । योभन्दा धेरै जनासँग सकिन्न अहिले । तर अहिलेसम्म कति ग्राहक भए होलान् गन्न सक्दिनँ । बूढाहरुले भर्खरका केटी खोज्छन् । भर्खरका केटाहरुले भने अलि उमेर पुगेको खोज्छन् । तर १५÷१६ वर्ष उमेरका केटासँग सम्बन्ध राख्न भने लाजै लाग्छ ।
एक जना भनेर तीन जना आउँदा
एकचोटी काठमाडौँमा होटलमा एकजनाले मसँग सम्बन्ध राख्ने भनेर आयो । उसलाई मैले सक्दो खुसी बनाउने प्रयास गरेँ । जब उसले काम सक्यो, त्यसपछि म नउठ्दै अर्को केटा पनि आयो । ऊसँग पनि गर् भन्यो, गरेँ । ऊ गयो, फेरि अर्को आयो । तीनै जनाले भोग गरे तर एक पैसा दिएनन् । यस्तो सम्झँदा अहिले पनि नमज्जा लाग्छ ।
सेक्स भावनात्मक र शारीरिक मिलन भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ तर हामीजस्ता यौनकर्मीको भावना कसले बुझ्ने रु कोही ग्राहक त पशुजस्तै हुन्छन् ।
एक दिन त्यस्तै पशुजस्तो ग्राहक मेरो भागमा पर्यो । उसको सेक्स गर्ने तरिका शरीरलाई निकै पीडा दिने रहेछ । उसले जसरी बस् भन्यो उसरी बस्न पर्ने । नयाँ–नयाँ स्टाइलमा बस्न लगाउँथ्यो, नबसे झपाथ्र्यो । भन्थ्यो– ‘मैले तँलाई पैसाले किनेको हो, मैले जसरी बस्, गर् भन्छु तैँले उसैगरी मान्नुपर्छ’ । त्यो समयमा यति दुखेको थियो कि म त २÷४ दिन काम नै गर्न सकिनँ ।
म मध्यम स्तरकी
यौनकर्मीको पनि स्तर हुने रहेछ । यो पनि काठमाडौं आएपछि नै थाहा पाएकी हुँ । मैले जसरी काम गर्छु, यो मध्यम स्तरमा पर्ने रहेछ । एक प्लेट मम र चाउमिनमा शरीर बेच्नेहरु पनि यही काठमाडौंमा छन् । उनीहरु निम्न स्तरमा पर्ने रहेछन् । दिनकै लाखौं लिने उच्च तहमा पर्ने रहेछन् ।
पेशा गर्दागर्दै ४० हाराहारी पुगेँ । अहिले ग्राहक खोज्दै हिँड्दिनँ । फोन आएपछि जान्छु । अहिले मेरो फिक्स रेट पनि छैन । ग्राहक आफैंले बुझेर दिन्छन् । एक रातको त्यस्तै १०÷२० हजारसम्म दिन्छन् । कोहीसँग त माग्नै पनि मिल्दैन । प्राय गर्लफ्रेन्ड मानेकोसँग पैसा माग्दिनँ ।
कुनै पछुतो छैन
मेरो कहानी सुन्दा पछुतो रहेछ कि जस्तो लाग्दो हो तर छैन । श्रीमान् हुँदाहुँदै, आर्थिक स्रोत बलियो हुँदाहुँदै यस्तो काममा लागेको भए पनि किन लागे हुँला भन्ने हुँदो हो ।
पहिला दुःख पाएँ तर अहिले यही पेशाले मलाई काठमाडौंमा मज्जाले बस्न सक्ने बनाएको छ । सन्तानलाई स्कुलमा पढाउन पाएकी छु । आर्थिक अवस्था राम्रै छ ।
माइतीले हेरेनन्, घरकाले भरथेग गरेनन् । कुनै काम गर्न न सीप थियो न शिक्षा । मैले त्यो बेलामा आफन्तको साथ खोजेकै हो नि १ कसैले दिएन । के खाइस्, के लाइस् रु बालबच्चा कसरी पढाउँछेस् भन्ने कोही भएनन् । अनि जे जानेँ, त्यही गरेँ । /साभार शुक्रबार
जेठ ३ गते, २०७६ - १७:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारको गरेको बन्दाबन्दीको अवधिभरलाई...
हेटौडा । नेपाल सरकारले उखु उत्पादन किसानलाई अनुदान दिन रु ९५ करोड बजेट विनियोजना गरेकामा उखु किसानले...
काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले जातीय विभेदलाई लिएर पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा...
पेरिस । विभिन्न देशका केही रेस्टुरेन्टहरुमा कोरोनाभाइरस फैलिन न्युनिकरण गर्ने व्यवस्थासहित पुनः...
सप्तरी । बोदे बर्साइन नगरपालिका–५ स्थित चन्द्र नमूना माविको क्वारेन्टाइनमा खटिएका थप एक प्रहरीमा...
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आज एक जना करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ भने अर्को एक जनाको पानीमा तैरीएको अवस्थामा...
काठमाडौ । सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज...
कोहलपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको...
कञ्चनपुर । क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएका कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षको थ्रोट स्वाबको...
उपत्यकामा अझै लुकीछिपी भित्रिने क्रम रोकिएन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गरेको बताइए पनि अझै लुकीछिपी तथा प्रहरीको आँखा छलेर आउने...
अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थामा मदिरा सेवन झन् हानिकारक
बालबालिकामा मानसिक समस्याको जोखिम ह्वात्तै बढ्यो
तपाईंको आजको राशिफलले के भन्छ ? जान्नुहोस्
लकडाउनको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा आउन सक्छ संकट
तपाईंको आजको भाग्यफल कस्तो छ ? थाहा पानुहोस्
आज तपाईंको राशिफल कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस्
कोरोना भाइरस लागि सकेपछि कसरी निको हुन्छन् रोगी ?
तपाईंको आजको राशिफलले के भन्छ ? थाहा पाउनुहोस्